Guddiga hir-gelinta doorashooyinka oo soo dhoweeyay shirka loo ballansanyahay ee dhex mari doona maamul gobolleedyada iyo dowlada dhexe – Kalfadhi
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa maanta soo dhoweeyay kulanka hoggaanka Golaha siyaasadda ay qorshaynayaan in ay deg deg u qabtaan, una xalliyaan tabashooyinka jira si dalka ay uga bilaabato doorasho loo dhan yahay oo caddaalad u dhacda, taas oo ah himilada ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
“Guddigu wuxuu ka codsanayaa hoggaamiyayaasha Golaha siyaasadda in ay ku daraan arrimaha doorashada ee go’aammada ka gaarayaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee 2021, qoondadaas oo ku cadayd heshiisyadii horey loo gaaray oo dhigaya in xubnaha baarlamaanka ay 30% noqdaan haween”.
“Guddigu, isagoo maanka ku haya caqabadaha kala duwan ee haweenka hortaagan, sida tan ka imaanaysa wax qaybsiga qabaa,ilka iyo duruufaha dhaqaale ee jira waxa aan usoo jeedinaynaa Golaha wadatashiga Qaran in khidmada lacagta laga dhimo 50% haweenka tartamaya. Guddigu, isaga oo eegaya xaaladaha waddanku ku sugan yahay ee dhinacyada amniga, siyaasadda iyo duruufaha kale ee nololeed ee ay qabaan dadka Soomaaliyeed, ayaa waxaa uu ku boorinayaa hoggaamiyayaasha siyaasadda in ay qaataan go’aammo lagu badbaadinayo dadka iyo dalka.” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay guddiga.
Halkan ka akhriso war-saxaafadeedka:
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare iyo madaxweynaha Puntland oo ka wadda-hadlay arrimaha doorashooyinka
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday gogosha tacsida madaxweynihii hore Cali Mahdi